[APK] Oneplus 6T Launcher, Weather App နှင့် Gallery ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ Androidsis
သင့်မှာ Android terminal ရှိပြီး၎င်းကို Oneplus 6T အဖြစ်ပြောင်းချင်ရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Oneplus 6T Launcher ဆိပ်ကမ်း ငါအဖြစ်ကောင်းစွာအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော မိုးလေဝသအက်ပလီကေးရှင်းများ၊ ဘယ်တော့မှမနေပါနှင့် အဲဒါကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့အောင်မြင်အောင်လုပ်မယ်။
အခြေခံအားဖြင့်တစ်ခုတည်းသောလိုအပ်ချက်မှာ terminal တစ်ခုရှိရန်ဖြစ်သည် Android 8.0 နှင့်အတူ Androidနှင့် Oneplus 6T Launcher သည်အနည်းဆုံး Android version ကိုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။
ဒါကြောင့်သတိရပါ - Oneplus 6T Launcher ကိုမည်သည့် Android တွင်မဆို install လုပ်ရန်သင်အနည်းဆုံး Android version Oreo 8.0 လိုအပ်လိမ့်မည်။ မိုးလေ ၀ သအသုံးချပရိုဂရမ်များကို install လုပ်စဉ် Widget Never Settle နှင့်ပြသခြင်းကို Android 5.0 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောဗားရှင်းလိုအပ်သည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောအနိမ့်ဆုံးသတ်မှတ်ချက်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သွားနိုင်သည် သင်၏ Android ကိုအံ့သြဖွယ်ကောင်းသော Oneplus 6T ၏ပုံသဏ္ဌာန်နှင့်အညီထားခဲ့ရန်လိုအပ်သည့်အပလီကေးရှင်းများကိုဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ တပ်ဆင်ပါ ဒီဆောင်းပါးရဲ့အစမှာသင့်ကိုငါထားခဲ့တာကိုဗွီဒီယိုထဲမှာငါပြတဲ့အခါ
1 Oneplus 6T application ကို download လုပ်ပါ
1.1 တရားဝင် XDA Developers forum မှ Oneplus 6T အပလီကေးရှင်းကိုကူးယူပါ
2 ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသော apks များကိုကျွန်ုပ်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။
Oneplus 6T application ကို download လုပ်ပါ
ထိုအခါငါလိုအပ်သော applications များဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး install လုပ်ဘို့လိုအပ်သော apks ထားခဲ့ပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Android ကို Oneplus 6T အဖြစ်ပြောင်းပါ, အနည်းဆုံးအဖြစ်ဝေးအသွင်အပြင်သက်ဆိုင်ရာအဖြစ် !!
တရားဝင် XDA Developers forum မှ Oneplus 6T အပလီကေးရှင်းကိုကူးယူပါ
ဒီ link ကနေ Oneplus 6T Launcher နဲ့ Weather Widget ကို download လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
ဤ link မှရာသီဥတုအခြေအနေနှင့် Oneplus ဓာတ်ပုံပြခန်းကို download လုပ်ပါမည်.
သငျသညျဤမျှလောက်ဒုက္ခမပါဘဲတိုက်ရိုက် download လုပ်ဖို့ကြိုက်တတ်တဲ့နှင့်သင်၏အသုံးပြုသူတစ် ဦး ဖြစ်လျှင် ကြေးနန်းအပေါ် Androidsis အသိုင်းအဝိုင်းသို့ဖြစ်လျှင်သင်သည် apk အားလုံးကို download လုပ်၍ အောက်ပါ link ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့် community ထဲသို့တိုက်ရိုက်သွားနိုင်သည်
Telegram ရှိ Androidsis အသိုင်းအဝိုင်းမှ apk များအားလုံးကိုဒီမှာနှိပ်ပါ
apks များကိုဒေါင်းလုပ်ချပြီးသည်နှင့်သင်သည်၎င်းတို့ကိုရှာတွေ့ရန်ပြhaveနာများရှိပါကဖိုင်တစ်ခုစီ၏အချက်သုံးချက်ကိုနှိပ်ပါ။ သူတို့ကိုသင်၏ Android ၏ Downloads ဖိုင်တွဲတွင်သိမ်းဆည်းရန် Telegram ကိုပြောပါ, Download ဖိုင်တွဲ။
ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသော apks များကိုကျွန်ုပ်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။
ယခင် download လုပ်ထားသော apks များကိုတပ်ဆင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ၏ချိန်ညှိချက်များသို့သာလျှင်ဤ apk များကိုတပ်ဆင်မည့် application ကိုရွေးချယ်ရမည်။ သင်မသိသောရင်းမြစ်များသို့မဟုတ်ရင်းမြစ်များမှခွင့်ပြုချက်ကိုပေးသည်.
သင်လွန်ခဲ့သောအချိန်ကဖန်တီးခဲ့သောဤလက်တွေ့ကျသင်ခန်းစာတွင် ငါသည်သင်တို့ကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြပါ မသိသောရင်းမြစ်များကိုမည်သို့ဖွင့်ရမည်နည်း Android Oreo နှင့်ယခင် Android ဗားရှင်းများတွင်ပါ။
Launcher ကိုတပ်ဆင်သောအခါသင်၏ Huawei P20 PRO တွင်ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ဖြစ်ခဲ့သည့်အတိုင်းအတင်းအကျပ်ပိတ်ပစ်ခြင်းနှင့်ပြhaveနာများရှိပါကအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဗီဒီယိုတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်အသေးစိတ်ရှင်းပြပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပေါ်တွင်မည်သည့် Launcher ကို install လုပ်သည့်အခါအတင်းအကျပ်ပိတ်ပစ်ခြင်း၏ဤပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်ပုံ.
ဗီဒီယိုကိုရည်ရွယ်သည် Nova Launcher နှင့်အတူအတင်းအဓမ္မ shutdown ပြissuesနာများကိုဖြေရှင်းပါ ဤ Launcher နှင့်အခြား Launchers များအတွက်အတူတူပင်ဖြစ်သော်လည်းဤသီးခြားပြproblemနာအားကျွန်ုပ်တို့အားတင်ပြသည်။
ဒါတွေအားလုံးပြီးပြီဆိုရင်မင်းလုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ် သင်၏ Android သည် Oneplus 6T သစ်ကဲ့သို့တင့်တယ်လှပသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်သည်သင်၏ Huawei P20 PRO ကိုညှိထားသောဤပို့စ်အစတွင်သင့်အားထားခဲ့သည့်ဗွီဒီယိုသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » သင်၏ Android ကို Oneplus 6T အဖြစ်မည်သို့ပြောင်းလဲမည်နည်း